Facebook ကိုဟပ်ကြမယ် - နည်းပညာ
5/04/2013 09:45:00 AM နည်းပညာ No comments
တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ မလိုအပ်ပဲနဲ့ တခြားလူတွေကိုတော့ လိုက် အနှောင့်အယှက် မပေးစေချင်ပါဘူးဗျာ...လိုအပ်မှ လုပ်စေလိုပါတယ်...educational purpose only ပေါ့ဗျာ...
ကရအောင်ဗျာ...ပထမဆုံး www.facebook.com ကိုသွားပါ...forgot password ကို နှိပ်ပါ...ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ဗျာ...
ကိုယ် hack ရမယ့်လူ သားကောင်ရဲ့ facebook profile email ကို သိဖို့တော့လိုပါတယ်....မသိဘူးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ...ကိုယ်က သူ့အကောင့်လိုချင်တာပဲ...ဒီလောက်လေးကတော့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ စုံစမ်းသိရှိထားပြီးသားဖြစ်ရမှာပါ...ကိုယ်နဲ့ friend ဖြစ်နေရင် သူ့ info ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင် သိနိူင်တာပဲဗျာ...
Enter your email or phone no. နေရာမှာ သူ့ email address ကိုထည့်ပါ...Search ကို နှိပ်ပါ...result ထွက်လာရင် This is my account ကို နှိပ်ပါ....
ဒီအောက်က ပုံမှပြထားတဲ့အတိုင်း အဲ page ကို redirect ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်...No longer have access to these ကိုနှိပ်ပါ...
အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း new email , confirm new email တောင်းနေပါပြီ...ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ....
ကိုယ့် victim account ဟာ security question တပ်ထားရင် security question ဖြေခိုင်းပါလိမ့်မယ်...ဖြစ်နိူင်တာ ခန့်မှန်းဖြေကြည့်ပါ...ခန့်မှန်းလို့မရဘူး ဆိုရင်တော့ wrong answer ကိုသာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ...
တော်တော်များများ ဒီ step မှာ ရပ်ကုန်ကြတာများတယ်ဗျ...Security Question မေးလိုက်တာနဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ဘူး....Underground Forum တော်တော်များများမှာလည်း ဒီ step ကို မတွေ့ဖူးဘူးဗျ...လွယ်ပါတယ်...
၃ ခါ ရိုက်ထည့်စမ်းပေးရပါမယ်...၃ခါ ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Security Question ထပ်မဖြေခိုင်းတော့ဘဲ ဒီအောက်ကပုံ အဆင့်(Trusted Friend သုံးယောက်)ရွေးခိုင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်...
အဲ...ဒီတစ်ဆင့်မှာလည်း trusted friend နော်...ရိုးရိုး friend မဟုတ်ဘူး...friend ဖြစ်ရုံပဲ ဖြစ်တာဆိုရင် သူရွေးခိုင်းတဲ့အထဲမှာ မပါပါဘူး...comment တွေ status တွေ အသွားအပြန်လေးလည်း ရှိရသေးတယ်ဗျ...အဲဒါကြောင့်မို့ facebook မှာ ကိုယ်နဲ့လည်း မသိပဲနဲ့ ရောသောဖောသော လာလုပ်နေပြီဆိုရင် သတိသာထားပေတော့....ဒီကောင် ဘာကောင်လဲ လို့.... :D
အဲဒီမှာ ယုံကြည်ရမယ့် ကိုယ် ချုပ်ကိုင်နိူင်မယ့် အကောင့်သုံးခုကို ရွေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ...fake facebook profile လေးတွေလုပ်ထားပေါ့ဗျာ...လိုရင် သုံးလို့ရအောင်..... :D facebook က အဲသူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဆီကို code လေးတွေပို့ပါလိမ့်မယ်...အဲ code တွေကို ဒီဖက်မှာ ပြန်လာဖြည့်လိုက်ရင် facebook က ကိုယ့် email ဆီကို password reset mail ပို့ပါလိမ့်မယ်...ဒီလိုဆို new password ကို ပြောင်းပြီးတော့ သူ့ facebook account ထဲကို login ၀င်နိူင်ပါပြီ....